Agorapulse: Mpempe Ozi Mfe Gị Dị Mfe, Nke jikọrọ Aka Maka Njikwa Mgbasa Ọha Obodo | Martech Zone
Ihe karịrị afọ iri gara aga, na Social Media Marketing World, ezutere m ụdị obiọma na amamiihe Emeric Ernoult kwuru - onye nchoputa na onye isi nke Agorapulse. The ahịa Social Media njikwa jupụtara na mmadụ. N'eziokwu. Mana Agorapulse na-emeso mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ụlọ ọrụ chọrọ ka ọ bụrụ usoro.
Ọ na-esiwanye ike ịhọrọ akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka mkpa anyị. Maka onye ọ bụla (dị ka m) na-anwa ijikwa ọtụtụ akụkọ na-akụ ma na-eme mkpọtụ na SPAM na ahịa ahịa, Agorapulse na-agbaji mkpọtụ ahụ. Iji mee ka ọ ka njọ, ndị na-ere ngwá ọrụ na-agbanwe onyinye ha na ụdị ọnụahịa ọtụtụ, na-ebulite ọnụ ahịa ma ọ bụ na-esi na ọrụ onwe ha bara uru gaa ọnụego azụmaahịa dị elu.
Agorapulse bu ihe nlekota oru Social Media nke m kwenyere na o ziri ezi. Nke a bụ ihe mere m ji eji ya kwa ụbọchị ma kwado ya na ndị ahịa ọ bụla…
Enweghị ọgba aghara Inbox. Oge ọ bụla m banyere, ana m ahụ igbe igbe akaụntụ nke ọ bụla na-egosi ọnụọgụ nke ihe ndị na-echere m ka m nyochaa.
Mgbe anyị gafere Agorapulse, anyị nwetara isi ebe anyị nwere igbe mbata nke weghaara ozi ziri ezi, ọ na-ejide nnụrụ, ma anyị nwere ike ịdọrọ na nkwupụta mgbasa ozi n'otu ebe ahụ, anyị nwere ike iji ya dịka anyị ga-eji igbe mbata ọzọ na sistemụ tiketi anyị.
Jamie Mendelsohn - pophụnanya
Otu igbe mbata jikọrọ ọnụ iji chekwaa oge
Agorapulse hazie ya Unified Social Igbe mbata -enyere gị aka imeta Igbe mbata Efu ngwa ngwa na mfe. Ozi ohuru, nkwuputa, na uche, maka Facebook, Twitter, na Instagram, ka egosiri na ndabara na a iji nyochaa iyo iji nyere gị aka ilekwasị anya n'ihe ndị kachasị ọhụrụ gị ma ha nọrọ ebe ahụ ruo mgbe ị ga-enyocha nke ọ bụla ma ọ bụ nyochaa otu ihe na bọtịnụ. Mkparịta ụka gị niile dabara n'otu ebe ị nwere ike ịhazi, jikwaa, nyefee, ma kpọọ mkparịta ụka ọ bụla gị na nzukọ gị.
Ndị na-emerụ ahụ - Hụ onye zitere ozi aha na profaịlụ ọ bụla akpọrọ. Tinye adabara kpọọ ka categorize gị ọrụ na esịtidem ndetu na-enye gburugburu gị otu.
Facebook Ad na Instagram Ad kwuru - Mekọrịta ozi mgbasa ozi gị niile. Nata stats ozugbo ịchọrọ ha n’usoro oge.
Ngwaọrụ Igbe - Igbe mbata, nzaghachi echekwara, omume dị ukwuu, ntụgharị asụsụ otu, ọrụ otu - nweta ha niile, agbanyeghị atụmatụ ị họọrọ.
Bido Akaụntụ Agorapulse Na-akwụghị Onwe Gị
Agorapulse na-enyere ndị otu gị aka ịkwalite, rụkọta ọrụ, ma hazie usoro mgbasa ozi mmekọrịta gị ka ịtọọ oge, kwado, ma bipụta akwụkwọ ebe ha nwere ike nweta ọrụ kacha mma na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla.
Njikọ Aka Otu - Kekọrịta ihe edetu, soro ihe omume, wee hụ onye na --ekwukọrịta okwu - n’oge.
Nnabata Kalinda - Ndị ọrụ nwere ike ịnakwere, jụ, ma ọ bụ nye nzaghachi na ntanetị ọ bụla. Gị na ndị ahịa gị nwekwara ike ịlele ihe niile edere, bipụtara, nnabata, na ọdịnaya jụrụ.
Social Media Publishing kwụ n'ahịrịs - Mepụta kwụ n'ahịrị edemede ka ịtọọ oge posts nke metụtara ọdịnaya na mkpọsa. Jide n'aka na ị nwere ezigbo nguzozi nke izu n'ime izu, niile na ile anya.
Nlele nke Social Media
Gee ntị na mkparịta ụka mgbasa ozi mmekọrịta gbasara akara aka gị, asọmpi, na oghere gị. Zaghachi ngwa ngwa na mgbanwe ndị a gbanwere ngwa ngwa.
Iyo - Lekwasị anya na ihe dị mkpa na YouTube na Twitter ọchụchọ. Gbanye na nkọwapụta site na ndị ọrụ boolean iji nweta ihe ị chọrọ.
haziri - Detuo usoro ọdịnaya gị site na ịkọ ihe, dị ka posts dị mkpa, ọrụ ndị asọmpi, na nzaghachi ndị ahịa maka iweghachite na nzaghachi dị mfe.
Discover - Nọgide n'elu ndị ahịa, atụmanya, na ohere azụmaahịa ọhụụ - na - enweghị oke.
Usoro mgbasa ozi na mgbasa ozi
Chọpụta ihe ọdịnaya dị na ya nke ọma, ebe, na mgbe. Sochie usoro gị na arụmọrụ otu gị ma nye gị ndụmọdụ maka ebumnuche mmekọrịta mmadụ na ibe gị na data njirimara onye ọrụ.
Focus - Chọpụta ihe ruru arụ ọrụ, nke a na-akwụ ụgwọ, ngụkọta zuru oke, clicks na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ etinyego maka ọdịnaya gị.
Chọpụta - Hụ ole ndị na - eso ụzọ ị nwetara ma ọ bụ tufuo, oge elelere ọdịnaya gị, yana mmekọrịta gị na ọdịnaya gị.
Tụọ - Jiri nlezianya nyochaa oge nzaghachi maka ndị otu ọ bụla iji hụ na mkparịta ụka mkparịta ụka na-abata na-edozi ngwa ngwa. Aziza nzaghachi na azịza enyocha, zoo, ma ehichapụ.
Akụkọ banyere ike - Mepụta akụkọ ọdịnala dabere na ọnụọgụ na akara ụbọchị ị họọrọ, gafee ọtụtụ profaịlụ mmekọrịta. Nwekwara ike iji oge atụnyere oge wee tọọ akụkọ na-akpaghị aka na email gị.
Kinddị data a na-eme ka ọ dị mfe igosi ọrụ nke onye na-ejikwa akaụntụ ọ bụla. A nnukwu plus maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ freelance obodo oru.
Social Media Management Platform Maka genlọ ọrụ
Nweta ihe niile na-na-otu gị n'ụlọnga elekọta mmadụ media management ngwá ọrụ-ọnụ maka na-eto eto ìgwè.
akuko - Mepụta mepụta ma kesaa nyocha na omimi miri emi n'ime mmekọrịta ndị ahịa gị, itinye aka, na uto. Nweta ọtụtụ nhọrọ nhazi.
Nkwado ọdịnaya - Nye usoro nkwado nke ọma. Jiri otu kalenda maka ọtụtụ profaịlụ mmekọrịta dịka atụmatụ gị kwere. Ka ịgbakwunye ndị ahịa, ịnwere ike ịgbakwunye kalenda.
ọrụ - Admin, nchịkọta akụkọ, onye mmezi, ọbịa - nye ndị ahịa na ndị ọrụ ọhụụ ọrụ. Ọrụ ọ bụla dịgasị iche na ohere ya iji biputere, zaghachi, na akụkọ.
Ọ dị oke mkpa na m nwere ngwa mkpanaka iji jikwaa akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta m na njem, yana ngwa Agorapulse bụ ihe niile m chọrọ! Enwere m ike ijikwa mbipụta m niile site na ngwa ngwa Social Inbox!
ngosi: Abụ m onye na-anụ ọkụ n’obi onye ọrụ, onye ofufe, yana onye mmekọ nke Agorapulse! Ana m eji njikọ njikọta m na edemede a.
Tags: ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụagorapulsentupooemerichi okwaFacebookasọmpi facebookNdị na-asọmpi facebookasọmpi usoro iheomume nke facebookinstagramLinkedInusoro nnabata mgbasa oziusoro mgbasa ozi mmekọrịtanjikwa elekọta mmadụelekọta mmadụ mgbasa ozi management maka ụlọ ọrụmgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziọnụ ọgụgụ mgbasa ozi mmekọrịtaTwitter
Agbalịrị m ngosi ahụ ma nwee nkụda mmụọ na ihe ndị a:
1. Enweghị ike ịtọọ oge reoccurring posts.
2. Enweghị ike ịchekwa ederede
3. Wepu site na ederede gara aga ma jiri ozo.
With gwala onye na Agorapulse gbasara nkwalite “ngwa ọrụ mbipụta” ha? Ana m agbalị ịchọpụta ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ijide ma ọ bụ. Enwere okporo ụzọ okporo ụzọ nke atụmatụ ndị ị nwere ike ịhụ n'otu ebe?
Ndewo Jp. E kwesịghị itinye # 1 n'ọrụ ka ọ bụrụ mmebi iwu nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Twitter, Facebook na LinkedIn anaghị ekwe ka mmelite mmelite ugboro ugboro. # 2 bụ ihe na-adọrọ mmasị ma dị ka nnukwu echiche. # 3 nwekwara ike ịbụ nsogbu na # 1. Aga m eziga kọntaktị m na Agorapulse eri a ka m kwuo.
Emeric Ernoult kwuru
Hey Jp, nnukwu nzaghachi! Daalụ maka iwepụta oge iji zaghachi Doug 🙂
N'ezie Jp, ị zuru oke, enwere ụfọdụ isi ihe na-efu na ngwa ọrụ mbipụta anyị. Ozi ọma ahụ bụ: anyị amalitela ịrụ ọrụ na ha 2 ọnwa gara aga ma ha na-abịa, ikekwe mbido Septemba:
- A kwụ n'ahịrị maka onye ọ bụla na akaụntụ, ebe i nwere ike kwụ n'ahịrị otu ọdịnaya otutu ugboro (ma ọ bụrụ na ọ bụ evergreen, n'ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị, ihe bụ isi point
- Otu njirimara kalenda nke enyi na enyi (ndị ọrụ anyị hụrụ echiche ahụ maka ọdịnaya ha n'anya).
Na, ntakịrị oge ka e mesịrị, anyị ga-agbakwunye mbipụta ọtụtụ akaụntụ (bipụta ya na akaụntụ niile ma ọ bụ severakl ozugbo). Mgbe ahụ, anyị ga-agbakwunye LinkedIn, wee Instagram, ma eleghị anya G + (ka na-eche banyere nke ahụ).
Yabụ, ọ bara uru ichere ọnwa ọzọ, ọkachasị ebe ọ bụ na anyị ga-eweghachite ngwa mkpanaka anyị n'oge ahụ (ido onwe anyị n'okpuru ụlọ ahịa ngwa taa mgbe afọ gachara 🙂